विज्ञानकाे चमत्कार : अब बाँदर पनि मान्छेजस्तै वुद्धिमान्
सावधान ! फेन्सी पसलको लुगा फेर्ने रुममा क्यामेरा त छैन ?
जहाँ २२ रुपैयाँका लागि किशोरीले शरीर बेच्छन् !
संसारकै बिचित्रका मानिस, जसको टाउकोमा दुइतिर अनुहार
वाईफाई कसरी सुरक्षित राख्ने ?
महोत्तरीमा घुमुवा प्रहरीहरु यसरी गर्छन् खुलेयाम तस्करी